Ahoana ny fomba hamoronana "teboka fanarenana" miaraka amin'i Clonezilla | Avy amin'ny Linux
Ahoana ny fomba hamoronana "teboka fanarenana" miaraka amin'i Clonezilla
Na dia efa noresahina tato amin'ity bilaogy ity aza ity programa mahafinaritra ity, dia tsy tokony ho diso hevitra isika ny amin'ny iray amin'ireo fahafaha-manao izay ananany ho fampitaovana fanampiny amin'ny fonosana fikolokoloana Linux: ny famoronana sary marina an'ny PC-nay ka raha ilaina dia azo atao ny mamerina azy amin'ny fanjakana teo aloha.
Ity dia fandraisana anjara avy amin'i Daniel Durante, ka lasa iray amin'ireo nandresy tamin'ny fifaninanana isan-kerinandro: «Mizarà izay fantatrao momba ny Linux«. Miarahaba anao Daniel!
Iza, avy amin'ny tontolon'ny Microsoft, no tsy nahita zavatra toa ny teboka famerenana amin'ny Linux? Iza, rehefa avy nampiasa Linux (raha tsy fanadiovana matetika ireo rakitra amin'ny fikirakirana rakitra tsy misy ilana azy, efa vita ny fonosana sns.), Dia tsy manana fiheverana fa "maloto" ny rafitr'izy ireo ary manapa-kevitra ny hamerina ilay asa amin'ny endrika sy mametraka indray ireo programa efa niasa matetika? Na, tsotra kokoa aza: iza no tsy nanenina nametraka zavatra na, fampiharana dia tsy mandeha araka ny tiana ary maniry ny hanana ny masinin'izy ireo toy ny talohan'ny "traikefa nahafaty". Raha mba nisy teboka fanarenana toy ny ao amin'ny Windows ...
Ity dia zavatra iray izay nanjavona Linux mihoatra ny indray mandeha. Na dia izany aza dia tsy maintsy lazaina ihany koa fa ny teboka fanarenana Windows dia tsy mamela ny rafitra marina tahaka ny teo alohan'ny fametrahana fampiharana. Azontsika atao ny mahita an'io amin'ny alàlan'ny fanovana ny rezistra Windows ary mahita fa, aorian'ny famerenana amin'ny laoniny ny fanjakana teo aloha, dia misy andinin-tsoratra ao amin'ny firaketana ny rakitra izay mifanaraka amin'ireo napetraka izay niniana hanafoanana izay sisa tavela.
Ao amin'ity bilaogy ity ihany, misy firesahana ny Mpitantana fonosana guix izay misy io fampiasa io (hamoronana isa azo averina).
Na izany aza, ny fahafaha-mampiasa clonezilla dia toa manintona tokoa satria tsy ilaina ny manaisotra singa tsirairay, hamerina ny solosaina amin'ny toetoetran'ny sary noforonina izy io, ary midika izany fa tsy mila mamerina handamina ireo habeny, lohahevitra sns. .
Misy koa ato amin'ity bilaogy ity a manondro ny fampiasana Clonezilla miaraka amin'ny lesona an-tsary mba tsy hamerenanay na inona na inona momba ny fikirakirana azy. Amiko manokana dia ampiasaiko ilay tanjona hanondroana kapila mafy ivelany ampifandraisin'ny seranan-tsambo usb ary misafidy ny kapila safidy ho an'ny sary aho (ary hamerina, sary mankany anaty kapila) mampiasa ny safidy 'Beginner' rehefa manome ny safidin'ny mpampiasa ny mpampiasa tadiavina ambaratonga satria miaraka aminy ny fanatontosana ny tanjona dia tanteraka.
Ary farany dia tsara homarihina Gofris. Misaotra an'ity programa ity, tena ilaina ho an'ireo izay manana cafe internet na manandrana betsaka amin'ny masinin'izy ireo, ireo programa dia hanadino ireo fanovana natao tamin'ny rafitra raha vao manomboka indray ianao. Na ny fanovana ny fisie na ny toe-javatra dia hanjavona rehefa haverina indray ny solosaina. Raha vao ampiharina ny "freeze", avy eo ianao dia afaka manova ny masininao, manandrana rindrambaiko mety hampidi-doza ary tanteraho ny fanodinana tadiavinao, satria rehefa averinao ny rafitra dia hiverina amin'ny fomba taloha ny zava-drehetra alohan'ny "hatsiaka" azy. .
Loharanon-tsary: ​​Guillermo Vélez
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Ahoana ny fomba hamoronana "teboka fanarenana" miaraka amin'i Clonezilla
Guillermo Velez dia hoy izy:
Hahaha video ko io !!! Manantena aho fa tianareo rehetra izany. Tena tsy raharahako izany fa faly aho raha voatonona tao amin'ny fidirana ho mpanoratra ny horonantsary. Nandany ahy ny asako !!!!
Bilaogy mahafinaritra be. Ataoko anaty ankafiziko izany.
Valiny tamin'i Guillermo Vélez
Jereo fa tsy nametraka ny loharanon'ireo horonan-tsary youtube mihitsy izahay tamin'ny antony tsotra fa raha tsindrio ilay horonantsary dia afaka mandeha amin'ny pejy youtube tany am-boalohany ianao izay milaza fa tsy ny mpanoratra ihany fa ny video hafa koa azonao atao.
Ary koa, ho fiadanan-tsaina dia ampidirinay ao amin'ny faran'ny lahatsoratra ny loharano.
Ny Ofris ihany no mamaivay ny trano, raha apetraka ny programa dia mijanona ireo, farafaharatsiny ny ankamaroan'ny ankamaroany
Fandraisana anjara tsara =)
Salama, vaovao aho eto sy amin'ny tontolon'ny Linux.
Aiza ny rohy misy ilay horonan-tsary?